Igama lesayensi: Cucumis melo
Igama elivamile: I-Cantaloupe, i-Melon, i-Musk melon noma i-Spanspek
Kuthiwa lesi sitshalo sasivela eNingizimu Ntshonalanga ye-Asia lapho kuqala kuthiwa yi-Musk Melon ngenxa yomnukela lapho ivuthiwe. Isithelo kamuva saziswa eYurophu futhi sabizwa ngegama ledolobha lase-Italy elibizwa ngokuthi iCanalupo lapho lihlwanyelwe khona ngemva kokuba imbewu ivela e-Armenia eMbusweni wasePheresiya.
Kunendaba ethakazelisayo ngemuva kwalokho abanye bakholelwa ukuthi bangumthombo wegama lesiBhunu nge-cantaloupe, i-spanspek. Kuthiwa kuvela ku-Spaanse spek okusho ukuthi ibhekeni laseSpain. Umama uJuana Maria Smith, umfazi wa-Sir Henry (Harry) Smith (wayekhetha ukubizwa ngokuthi uHarry), uMbusi waseCape Colony maphakathi nawo-1800, wakhetha uCanaloupe noma uMusk Melon njengesidlo sasekuseni ngenkathi umyeni wakhe ekhetha amaqanda kanye nobhekeni. Ngenxa yelifa lakhe laseSpain lesi sinqumo esingavamile sabizwa ngokuthi "ibhekeni laseSpain" ngesidlo sasekuseni ngabasebenzi bayo.
I-cantaloupe iyingxenye yomndeni we-cucurbit. I-Cantaloupes ikhula emvinini onamathenda asakazeka emhlabathini. Umvini ungabhekwa ngezinhlobo ezincane ze-melon. Lesi sitshalo sinemifino ejulile engasakazeka kuyo yonke indawo ehlanganiswe amaqabunga nemivini. Inomsizi wempompi yempandne osekelayo owehla cishe ku-30 ​​kuya ku-40 cm. Ngakho-ke kubalulekile ukulawula ukhula nokunisela njalo njengoba izimpande eziningi zikhona enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm.
I-Cantaloupe isithelo esidliwa sodwa. Kungabuye sibe umpe noma ihlanganiswe nezinye izithelo kwisaladi. Ngezinye izikhathi izinhlobo ezithile zomile.
Njalo uhlaziye inhlabathi yakho ngaphambi kokulungiselela ukuqiniseka ukuthi zonke izidingo ezidingekayo ezinomsoco ezincane ezisemhlabathini zingakhululwa ngaphambi kokutshala. I-Cantaloupe ikhula ngcono kakhulu lapho inhlabathi inefenya encane. Okuqukethwe ubumba obukhulu kuphazamisa ukuthuthukiswa kwezimpande kanye namanzi. I-pH yomhlabathi kufanele ibe phakathi kuka-6.0 no-7.
Cishe amasonto ayisishiyagalombili ngaphambi kokutshala sebenzisa ifosifithi adingekayo nomcako ukulungisa i-pH kanye nezinto eziphilayo ezifana nomquba noma umanyolo, khona-ke ukulima ngokujulile ngo-60 cm. Cishe amasonto amabili ngaphambi kokutshala ulungiselele inhlabathi engaphezulu. Lokhu kwenziwa ngehhala noma i-rotavator ukuze aphule izidindi enhlabathi futhi ususe noma yikuphi ukhula oluye lwaqala ukukhula.
Uma ukutshala kufanele kube emibhedeni yembewu ephakanyisiwe kufanele zilungiselelwe amasonto amabili ngaphambi kokutshala. Ukuchelela kufanele kwenziwe futhi kuleli phuzu futhi uma kusetshenziselwa imfucufucu yeplastiki lokhu okubekwa phezu kwamagquma okwamanje.
I-Cantaloupes ithanda isimo sezulu esishisayo futhi yenza kahle uma izinga lokushisa lomusi liphakathi kuka-20°C kuya ku-30°C futhi lapho ubusuku obushisa obungaphansi kuka-15°C bungavamile. Ukukhula kunciphisa kakhulu uma ukushisa kwezinga lokushisa kusondela ku-10°C. Ngaphansi kwe-10°C ukuthuthukiswa kwesithelo kuthinteka kabi futhi kubangelwa ukulahlekelwa kwemikhiqizo. Lesi sitshalo sinokuzwela iqhwa futhi izitshalo ezincane zingabulawa yiyo. Imvula phakathi nengxenye yokugcina yenkathi yokukhula nayo ithinta kabi izithelo. Imvula iphinde ikhuthaze ukukhula kwakhunta.
I-honeydew, i-Galia, i-Hales Best, i-Piel de Sapo, i-Imperial, i-Edisto, i-Shipper yaseMpumalanga, i-Majestic, i-Charentais, i-Fargo ne-Caribbean King yizinye izinhlobo futhi kunezinye eziningi.
Ukuze kube nokuhlukahluka okuhle kakhulu endaweni yakho yokukhiqiza kungcono ukuthola iseluleko esivela kulesi sikhulu senkampani yembewu noma isazi sezolimo zendawo.